के खरीद बटनले सामाजिक मिडिया एट्रिब्युसन र आरओआईलाई मद्दत गर्दछ? | Martech Zone
बुधवार, अगस्त 12, 2015 बिहीबार, नोभेम्बर ०,, २०२० Douglas Karr
बटनहरू खरीद गर्नुहोस् सामाजिक मिडियामा तातो नयाँ चलन हो, तर तिनीहरूले धेरै ट्र्याक्सन प्राप्त गरिरहेका छैनन्। वास्तवमा, एक Invesp सर्वेक्षणले पत्ता लगायो कि २०१ commer मा सामाजिक वाणिज्य बिक्रीले केवल अनलाइन खुद्रा राजस्वको%% मात्र बनाएको छ। धेरै सामाजिक साइटहरू अझै पनि ग्राहकहरूको विश्वास प्राप्त गर्न स struggle्घर्ष गर्दछन्, त्यसैले प्लेटफर्महरूले प्रमाणित गर्न आवश्यक छ कि तिनीहरू सामाजिक रूपमा जान्न भन्दा बढि छन् उनीहरूलाई जित्नको लागि।
म अहिले पनि सामाजिक खरीद बटनको लोकप्रियता मा यस समय तातो छु। यो होइन कि मैले तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्दिन - मलाई पक्का विश्वास छ कि लगभग कुनै कार्यान्वयनमा सकारात्मक आरओआई छ। कसैले, अवश्य, क्लिक र खरीद गर्नेछ!
यो सामान्य ज्ञान हो कि अनलाइन रूपान्तरण दर बढाउनको लागि कुञ्जी रूपान्तरण गर्न आवश्यक चरणहरू कम गर्नु हो। दिमागमा त्यो साथ, यो केवल तार्किक छ कि सहज फ्रि बटन खरिद फनेलमा धेरै चाँडो राख्नु सम्पूर्ण समझको हुन्छ। तर यो तार्किक छैन। रूपान्तरण अप्टिमाइजेसनले खरीद निर्णयबाट रूपान्तरणमा लिइएको कदमहरूलाई छोटा बनाउँदैछ ... समस्या यो हो कि सामाजिक मिडियामा खरीद निर्णय छैन।
के त्यो परिवर्तन हुनेछ? म पक्का छु जब उपभोक्ताहरूले उनीहरूको सामाजिक वालेटहरूमा बढी भरोसा राख्छन् र महान सेवाका कथाहरू बजारमा उत्र्न थाल्छन्, तिनीहरूले सम्भवतः यी सुविधाहरू अधिक प्रयोग गर्नेछन्। यद्यपि, मँ अझै पनि एक विश्वसनीय माध्यम को रूप मा सामाजिक देख्न सक्दिन। र विश्वास खरीद निर्णय जित्ने एक निरपेक्ष कुञ्जी हो।
कुनै पनि सामाजिक प्लेटफर्ममा कुनै नम्बर छैन जुन तपाईले कलमा कल गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाई समस्यामा पर्नुहुन्छ (सायद उनीहरू खरीदको साथ गर्छन्, मलाई निश्चित छैन)। के म वास्तवमै क्लिक गर्न चाहन्छु? किन्न र अगाध खाडलमा एक अर्डर पठाउनुहोस्, के म सोच्दै छु कि म मेरो चीजहरू प्राप्त गर्दैछु, र सोचिरहेको छु कि यदि म समर्थन छैन भने कहाँ पाउने?
Pinterest यस बिन्दुमा सबैभन्दा उपयुक्त उपयुक्त सामाजिक साइट जस्तो देखिन्छ किनभने उनीहरूको धेरै दर्शकहरू पहिले नै किनमेल गर्दैछन् र Pinterest च्यानलहरूले बढि बढि साइटहरू वा ब्राण्ड प्रचारित प्रतिबिम्बित गर्न सक्दछन्।
यहाँ सामाजिक खरीद बटन कार्यान्वयनका केही उदाहरणहरू छन्
फेसबुक खरीद बटन:
ट्विटर खरीद बटन:
Pinterest खरीद बटन:
Instagram खरीद बटन:
टैग: विशेषणबटन किन्नुहोस्फेसबुक किन्नुहोस्इन्स्टाग्राम किन्नुहोस्इन्भेस्पpinterest खरीदट्विटर खरीद